एमाले परिवर्तन गर्नुपर्छ मधेशप्रतिको सोच (फरकमत) | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » एमाले परिवर्तन गर्नुपर्छ मधेशप्रतिको सोच (फरकमत)
एमाले परिवर्तन गर्नुपर्छ मधेशप्रतिको सोच (फरकमत)
नेकपा एमाले एक व्यवस्थित पार्टी हो । विगतको अनुभव र वर्तमानको विश्लेषण गरि भविष्यप्रति चिन्तित र जिम्मेवार पार्टी पनि हो । तसर्थ एमालेलाई मधेसको सबालमा पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिन्छ । देशको निकास र विकासको लागि मधेशलाई वाइपास गरेर सफल हुनसक्दैन ।
मधेशलाई जोडेर संघियताको सबालमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नाकारात्मक टिका टिप्पणी गर्नु हुदैन । संघियताको माध्यमबाट नै पहिचान र अधिकारको सबालमा फराकिलो हुन जरुरी छ । मधेस आान्दोलनको उपलब्धीलाई रक्षा गर्न अघि सर्नुपर्छ त्यो एमालेको दायित्व पनि हो । देशको ठूलो दोस्रो दल, संघर्ष र आन्दोलनबाट जन्मेका एक जिम्मेवार एमाले पार्टी मधेशी जनताका लागि चाहिने दल हो ।
मधेशमा एमालेको खाँचो छ । मधेशी जनताले उठाउँदै आएको मागहरु सबै जायज छन् । ती सबै समस्या मधेशका हुन् तर त्यसलाई एमालेले मधेशीको मागपनि भारतबाट आएको भन्छन् । यो सरासर गलत हो । आफ्नै देशका जनतालाई भारतको नजरले हेर्नु गलत हो ।
एमालेले मधेशीको भावनालाई बुझ्नु पर्छ । त्यसैले एमालेले मधेसी जनतालाई साथमा लिएर समग्र देशको कायापलट गर्न लाग्नु पर्छ । मधेसमा एमालेलाई घृणाको नजरले हेर्न लागेको छ । युवा पिढी एमालेले हाम्रो अधिकारको रथ रोकेको छ । संविधान संशोधन हुन नदिन संसदलाई बन्धकी बनाएको आरोप छ । यसलाई बेलैमा सच्चयाउन ध्यान दिने कि नदिने ? मधेसका नेता कार्यकर्ताको उच्च मनोवल बढाउन सोच्ने कि नसोच्ने ? यी गम्भीर प्रश्नको समाधानमा एमाले लाग्नु पर्छ ।
एमाले मधेसमा पनि कमजोर हुनु हुदैन । एक समर्थक कार्यकर्ताको पिडा सुन्न तयार हुनु पर्छ । मधेस आन्दोलनका अगुवा कृष्ण बाहादुर यादव भन्नुहुन्छ–‘मधेस आन्दोलनको उदगम बिन्दु रहेको लहानमा आन्दोलनको बिगुल फुक्दा मलाई एमालेको नेता कार्यकर्ताले साथ दिनुभएको थियो । आज किन एमालेको नेताहरू कठोर बनिरहेको छ, बुझ्न सकिएको छैन ।’
एमाले मधेसको सबालमा लचिलो हुनुपर्छ । राष्ट्रियताको सवालमा मधेसी जनता सचेत छ । बाह्य शक्तिको चलखेल रोक्ने पक्षमा स्वभिमानी मधेसीहरू रहेको छ । दक्षिणी सिमाको रक्षा गरेको मधेसी जनता सुन्दर सम्पन्न नेपालको निर्माणको लागि मधेसीहरूमाथि भइरहेको विभेदको अन्त्य होस् । यस न्यायिक मागलाई अन्यत्र मोडेर एमाले मधेसी जनतासँग टाढिनु हुदैन ।
पार्टीको एक बफादार कार्यकर्ताको पुकार सुन्ने कि नसुन्ने ?
एमाले पार्टीका कार्यकर्ताहरू इमानदार छन् । एमाले पार्टीमा अनुशासन छ । विधि र पद्धतिबाट चल्छ । यसको अर्थ यसरी बुझ्न पनि गलत हुन्छ कि अनुशासित कार्यकर्तामाथि केवल आदेश मात्रै फर्मान गर्ने । मधेसमा एमालेलाई मजबुत बनाउने यूवाहरूमा आकर्षण घट्नुलाई चिन्तित बनाउन लागेको यथार्त बुझ्न ढिलाई नगरौ ।
एमालेले मधेसी, पहाडी, जनजाति, थारु, दलित र मुस्लिम सबै समुदायको उत्तिकै माया गर्ने पार्टीको रुपमा प्रस्तुत हुन बाल हठ प्रवृत्तिलाई छोडेर नरम रुख अपनाउन एमाले लाग्नु पर्छ । यसरी प्रस्तुत हुँदा निकट भविष्यमा एमाले वाम एकताको अभियान थालेर आउने चुनावमा एक नम्बरको पार्टी बन्ने अवसरबाट चुक्नु हुदैन ।
१० औ बलिदानी दिवसको अवसरमा लहानमा भएको बस्तु स्थितिलाई हेर्दा मधेसमा यूवाहरू आफ्नो भविष्य सिके राउतको साथमा देख्न थालेको परिस्थिति छ ।
मधेशी युवाको उभार सिके राउतको सभामा देखियो । १५ देखि ३० वर्षको यूवाहरूको जबरजस्त उपस्थितिले मधेसका युवाहरु मधेसबादी दलहरूको क्याम्फ छोडेर सिके राउतको समर्थक बन्न लागेको तस्वीरले देखायो ।
परिवर्तनको संवाहक यूवा आकर्षणले के देखाउँछ भन्ने मधेसको पहिचान र अधिकारलाई संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गर । नत्र मधेसका युवा आक्रोश कसैको नियन्त्रणमा नरहने मधेस आन्दोलनको उदगमस्थल लहानको ठाउँ ठाउँमा सिके राउतको सभामा युवाहरूको उपस्थितिले अडकल हुन थालेको छ । यसले मधेशवादी दल, काँग्रेस, माओवादीलाई मात्र घाटा हुँदैन, एमालेलाई पनि नोक्सान गर्छ । एमालेले जतिजति मधेशलाई चिढाउने काम गर्छ, सिके राउतको संगठन त्यति नै बलियो हुँदैजान्छ । मधेशमा एमालेको व्यवहारलाई सबै दललाई घाटा भएपनि सिके राउतलाई फाइदा नै भइरहेको छ ।
एमालेको समर्थक नेता कार्यकर्ताहरूले पार्टीको अनुशासनको घेरालाई ननाघेपनि मनमनै एमाले मधेसको सबालमा नरम रुख अपनाएर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा रहेको कुरा एमालेले बुझ्नु पर्छ । मधेसमा एमालेप्रति घृणा होइन, माया स्नेह पलाउने तर्फ लाग्नु परयो ।